Diyo post :: गोपाल किराँती भन्छन्,‘प्रचण्डलाई पेरिसडाँडाबाट लखेटिन्छ,पेरिसडाँडा पहिचान र माओवाद मान्नेको हो’ गोपाल किराँती भन्छन्,‘प्रचण्डलाई पेरिसडाँडाबाट लखेटिन्छ,पेरिसडाँडा पहिचान र माओवाद मान्नेको हो’ - Diyo post
गोपाल किराँती भन्छन्,‘प्रचण्डलाई पेरिसडाँडाबाट लखेटिन्छ,पेरिसडाँडा पहिचान र माओवाद मान्नेको हो’
एक ढंगले हेर्दा प्रचण्डको षडयन्त्रकारी कार्यशैलीको महशुस हुन्छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबीच चुनावी तालमेल पार्टी एकताको समेत घोषणा भएपछि राजनीतिक कोर्स बदलिएको छ । चुनावी तालमेल र पार्टी एकतासम्मको निर्णयले अधिकांश माओवादी शिर्ष नेताहरु सहमत भएपनि एउटा पात्र भने निरन्तर विरोधमा आफ्नो आवाज बुलन्द गरिरहेका छन् । उनी हुन् – माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता गोपाल किराती । एमालेको राजनीतिक दर्शन र विचारमाथि निकै कटु आलोचना गर्ने किराती पूर्वका स्थापित नेता हुन् । उनै किरातीसँग वाम चुनावी तालमेल, उनको विमती र एमाले माओवादी र नयाँ शक्तिको गठजोठपछि उनको राजनीतिक भविष्यबारे दियोपोस्टले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत किरातीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईं समलग्न रहेको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र सहित नेकपा एमाले र नयाँ शक्तिबीच वाम धुर्विकरण र पार्टी एकताको भविष्यवाणी समेत भएको छ । तर, यसलाई लिएर तपाईंले विमती जनाउनु भएको छ किन ?
असोज १६ गते पेरिसडाँडाको एउटा छलफलमा अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेसँगको ७ बुँदे सहमति पत्र प्रस्तुत गर्नु भयो । एकता संयोजन समितिको संयोजकमा खड्क प्रसाद ओलीको नाम थियो । १७ गते ओलीको नाम हटेको थियो । चुनाव चिन्ह एमालेको घाम थियो । पछि करेक्सन भएछ । यो प्राविधिक विषय हो । यता वैचारिक र मुद्दागत विषय निकै गम्भिर छ ।
प्रचण्डलाई माओवादको सिद्धान्त र पहिचानको मुद्दा के हुन्छ भनेर मैले सोधेँ । जवाफ आएन । माओवाद र पहिचानको मुद्दालाई धरापमा पारियो । त्यसो भएर यो एकता नभएर विलय हो । विलय भएको हुनाले म एमालेमा जान्न एमालेको चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्दिन भनेर म भोजपुर हिँडे । २० गते आएँ । २१ गते र २२ गते फेरी अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुरा गरेँ । छलफल चलिराखेको छ । ‘छुट्नु हुँदैन’ भन्नु हुन्छ प्रचण्ड । सँगै बस्नका लागि सिद्धान्त र मुद्दा हुनु पर्यो । जहाँसम्म जनयुद्धको ऐतिहासिक भूमिकाको कुरा छ ।
एमालेले माओवाद र पहिचानलाई स्विकार्यो भने एकता हुन्छ । प्रचण्डले स्विकार गराउन सकेन भने विलय हुन्छ । किनकी कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त सिद्धान्त विचारधारा र दर्शनले चल्ने हो ।
माओवाद भित्रै त्यसलाई समेटिन्छ भन्ने मेरो बुझाई हो । माओवाद र पहिचानको मुद्दा अख्तियार गर्नु र छोड्नुको प्रश्न वर्ग दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित छ । वर्ग दृष्टिकोण सर्वहारा वर्गीय हुनेकी पुँजीवादी हुने यो अहम विषय हो । पुँजीवादी भित्र पनि राष्ट्रिय पुँजीवादी हुँनेकी दलाल पूँजीवादी हुने । गम्भिर सैद्धान्तिक प्रश्न उठेको छ । र, मैले विरोध गरिराखेको छु । छलफलमा दुई वटा विषयमा मलाई संस्थागत प्रत्याभूति दिलाउन भनेको छु । व्यक्तिगत र मौखिक रुपले होइन संस्थागत रुपले भन्नु पर्छ । उहाँले ‘पख पख’ भनिराख्नु भएको छ । म पर्खि राखेकोछु ।
तपाईंले भोजपुरमा हुँदैगर्दा रेडियो मार्फत माओवादी एमाले र नयाँ शक्ति तालमेल र एकताको खबर ‘सरप्राइज’ रुपमा थाहा पाउनु भयो । तपाईं जिम्मेवार नेतालाई पनि किन ‘सरप्राइज दियो पार्टीले ?
प्रचण्डको कार्यशैली हो । प्रचण्डको यो कार्यशैलीले कतिपय सन्दर्भमा राम्रो गरेको पनि होला । कतिपय सन्दर्भमा राम्रो गरेन । माओत्सेतुङको तीन गर तीन नगर भन्ने निर्देशीका छ । ‘खुला र स्पष्ट होऊ, छलछाम र षडयन्त्र नगर, माक्र्सवाद लागु गर संशोधनवाद होइन’ भन्छ । एक ढंगले हेर्दा प्रचण्डको षडयन्त्रकारी कार्यशैलीको महशुस हुन्छ ।
भन्नाले प्रचण्डले छलछाम र षडयन्त्र गरे भन्ने तपाईंको निष्कर्श हो ?
छलछाम र षडयन्त्र गर्नुपर्छ दुश्मनको विरुद्ध नकी आफ्नो पंक्ती विरुद्ध होइन ।
प्रचण्डले आफ्नै नेता कार्यकर्ता विरुद्ध छलछाम र षड्यन्त्र गरेका हुन् त ?
हो । त्यही निर मेरो प्रश्न छ । विचार र मुद्दामा पहिलो र कार्यशैलीमा दोस्रो प्रश्न छ ।
वैचारिक हिसावले एमाले माओवादीले समाजवादसम्म पुग्ने लक्ष राखेका छन् ? यो वैचारिक लाइन तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
कम्युनिस्टहरुले वैज्ञानिक समाजवाद मान्छन् । त्यही वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिका लागि नै माओवाद र पहिचानको मुद्दा चाहिन्छ । माओवाद र पहिचान छोड्ने भएपछि कसरी समाजवाद ? कसको लागि समाजवाद ? त्यो प्रश्न उठ्छ नै । जस्तो तामाङ र थारु नेपालको ठूलो जनसंख्या भएको समुदाय हो । जो उत्पीडित समुदायमा पर्दछन् ।
तामाङ र थारु जनसमुदाय भित्र धेरै ठूलो प्रतिशत गरिविको रेखामूनि छन् । गरिबीको रेखामूनिकालाई सर्वहारा वर्गले के भन्ने ? उसको जातिय र वर्गिय समस्या हल गर्नु पर्यो । त्यसको निम्ति समाजवादी क्रान्ति हो भनेर हामी कम्युनिस्टहरु बुझ्छौँ । एमालेले बुझ्ने अर्कै छ । एमाले कम्युनिस्टै होइन । एमाले त घोर दक्षिणपन्थी तत्व हो । त्यसलाई वामपन्थि बनाउने भन्ने प्रचण्डको प्रयाससम्म ठीक छ । गधालाई दोहोएर गाई हुँदैन भन्ने उखान जस्तै एमालेलाई निचोरेर वामपन्थि हुन्छकी हुँदैन त्यो भोलीको विषय भयो ।
कार्यशैलीमा प्रश्न हो । तर, यसलाई ‘सरप्राईज’ भनेर धेरैले भने । त्यो म मान्दिनँ । मलाई सरप्राइज होइन । म विषय वस्तु हेर्छु । अलिकति ठूलो कुरा गरीहालुँ । माओवादी पार्टीमा धेरै एकता भयो । धेरै विविध समुहहरुको एकताबाट माओवादी केन्द्र अहिले छ । तर, एउटा इतिहास छ । जतिसुकै सँग एकता गरेपनि दुई वटा समुह मात्रै इतिहासमा सशस्त्र समुह थिए ।
एउटा समुहको प्रमुख प्रचण्ड हो र अर्को सशस्त्र समुहको प्रमुख गोपाल किराती हो । हाम्रो संगठन भूमिका, आकार सानो ठूलो फरक कुरा रहयो । तत्कालिन माओवादी सशस्त्र समुहको प्रमुख प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो भने किरात वर्कस पार्टी सशस्त्र समुहको प्रमुख गोपाल किराती थियो । मैले यहाँ दम्भ र घमण्ड प्रस्तुत गरेको होइन । ऐतिहासिक र वस्तुगत हिसाबले भनेको हो । ऐतिहासिक भौतिकवाद भनेर जो कम्युनिस्टहरुले भन्छन् त्यसको आधारमा म विषयलाई बुझ्छु ।
माओले भन्नु भयो, ‘विचारधारा वा कार्यदिशा सहि हुनु वा नहुनुले सवैकुराको निर्धारण गर्छ ।’ मैले प्रचण्डलाई यही सुनाउँदे भनेको थिएँ,‘खुव पढाउनु हुन्थ्यो नी मलाई । अहिले गुरुको विग्रेको हो की चेलाको ?’ प्रचण्डसँग जवाफै छैन विचरा । जवाफ हुने कुरा नै भएन ।
वाम चुनावी तालमेललाई बाहिर ‘सरप्राईज’ भनिएपनि तपाईंको फरक बुझाई छ । कसरी बुझाउनु हुन्छ यसलाई ?
यो सरप्राइज होइन । उहाँहरुले आवश्यकता बोध गर्नु भयो होला । मैले अर्को ५ वर्ष माओवादी नै भएर बल गरुँ भन्ने थियो । अस्ति चुनाव लडेका धेरै साथीहरु युवा हुनुहुन्छ । धेरै पराजित साथीहरु पनि युवा हुनुहुन्छ । कसरी पराजित भइयो कसरी विजय हुनेहोला भनेर उहाँहरुले शिक्षा लिनु भएको छ । अर्को ५ वर्ष पर्खियो भने हामी प्रगतिमा पुग्छौँ ।
प्रगति गर्न सकिएन दुर्गति हुन्छ भने पनि मानौँला भन्ने मेरो मत हो । तालमेलसम्म त केन्द्रीय सचिवालयले पारित गरेको नीति नै हो । एकतामा ‘भाँडा घोप्ट्याउने’ काम भयो । मैले भन्ने गरेको छु । माओवाद र पहिचानको मुद्दा छाडेर विलय हो । विलयमा म जाँदैन ।
माओवादी एमालेमा विलय हुनुका केही स्वार्थ छन् ? सत्ता स्वार्थ पनि भनिएको छ । के हुनसक्छ ?
एमालेले माओवाद र पहिचानलाई स्विकार्यो भने एकता हुन्छ । प्रचण्डले स्विकार गराउन सकेन भने विलय हुन्छ । किनकी कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त सिद्धान्त विचारधारा र दर्शनले चल्ने हो । धार्मिक उदाहरण दिनुपर्दा, वेद नमान्नेलाई हिन्दु मानिँदैन, कुरान नमान्नेलाई इश्लाम मानिँदैन । बाइबल नमान्नेलाई क्रिश्चियन मानिँदैन । ब्रम्हपथ नमान्नेलाई बुद्धिस्ट मान्दैनन् ।
अहिलेको २१ औँ शताब्दिको दुनियाको कम्युनिस्टले माओवाद मान्नै पर्छ । जसले माओवाद मान्दैन त्यो कम्युनिस्ट होइन । वेद नमान्नेलाई हिन्दु भनेर यहाँ कसैले देखाउन सक्छ ? आफ्ना–आफ्ना मुल्य मान्यता र दर्शन हुन्छन् । त्यसो हुनाले एमाले कम्युनिस्टै होइन । त्यो दक्षिणपन्थि हो । किन भने त्यसले माओवाद मान्दैन । हामीले माओलाई गुरु मान्दै आयौँ ।
म त आजिवन रुपमा मान्नेनै छु । प्रचण्ड माओलाई गुरु मान्ने सन्दर्भमा सक्रमणमा देखिनुहुन्छ । माओले भन्नु भयो, ‘विचारधारा वा कार्यदिशा सहि हुनु वा नहुनुले सवैकुराको निर्धारण गर्छ ।’ मैले प्रचण्डलाई यही सुनाउँदे भनेको थिएँ,‘खुव पढाउनु हुन्थ्यो नी मलाई । अहिले गुरुको विग्रेको हो की चेलाको ?’ प्रचण्डसँग जवाफै छैन विचरा । जवाफ हुने कुरा नै भएन ।
प्रचण्डमा अब ठूलो विचलन आइसकेको निष्कर्शमा तपाईं पुग्नु भएको हो ?
विचलन हो या एमालेलाई रुपान्तरण गर्न सक्छु भन्ने आँट पनि हुनसक्छ । प्रचण्डलााई लाग्दो हो, ‘जति गर्दापनि यो गोपाल किराती लगायतले चुनाव पनि जिताएनन् । यीनीहरुलाई पर्खेर बस्दा केही खालो सर्ने देखिएन । बरु घोप्ट्याइदिउँ । कमसेकम कम्युनिस्ट नामको वामपन्थि एकता चाहीँ गर्यो है प्रचण्डले’ भन्ने अर्को होला ।
माओवाद र पहिचान छोड्ने भएपछि कसरी समाजवाद ? कसको लागि समाजवाद ?
तर, वामपन्थी एकताको क्रेडिट प्रचण्डभन्दा माथि केपी ओलीले लिँदैनन् होला र ?
त्यसैले त मैले प्रचण्डलाई भने,‘हाम्री आमा साह्रै नै बाठी छन् । चामलसँग पीठो पो साटिछन्,’ । अर्को लेखनाथ पौडेलको कविता अलिकति मोडेर सुनाएँ,‘एमालेसित एकता गरेर हुन्छ के, क्रान्तिकारी विचार भएपो !’
त्यसकारण प्रचण्डलाई लागेको होला । जनजातीले पनि भोट दिएनन् । मधेसीलाई त्यस्तो दुख गर्दा पनि तेस्रो पार्टी । दलित पनि काम लागेनन् भनेर लगेर भाँडा घोप्ट्याउने काम गरेको हुनुपर्छ । एउटा चाहीँ रुपान्तरण गर्न सक्छु भन्ने आँट हुनसक्छ । तर, उहाँले भने जस्तै हुन्छ भन्ने त हुँदैन । उहाँले एमालेलाई रुपान्तरण गर्ने हिम्मत गर्नुभएको छ भने मैले सलाम गर्नुपर्छ ।
त्यसैलाई मद्दत गर्नका निम्ती माओवादी एमालेलाई मान्न लगाउनु पर्छ । खड्क ओली नेतृत्वको एमालेले माओवाद र पहिचानको मुद्दा मान्दियो भने देश भरीका जनयुद्ध लडेका, सहिद परिवार, घाइते परिवार, बेपत्ता परिवार, हात्तिछाप चप्पल लगाएर लाखौँ माओवादी समर्थक कार्यकर्ताले एमालेलाई धन्यवाद दिन्छन् । माओवाद र पहिचानको मुद्दा भित्र राष्ट्रियता,जनवाद, जनजिविका पनि पर्छ ।
त्यसलाई मान्यो भने हाम्रो देशमा चमत्कार हुन्छ । साच्चैको वामपन्थि र कम्युनिस्टबीचको एकता हुन्छ र कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ । तर प्रश्न छ त्यसो गर्नका लागि बाबुराम भट्टराई त्यहाँ आउनु भएको हो ? कम्युनीस्ट पार्टी सकेर पेरिसडाँडालाई ‘रातो स्टिकर टाँसेको घर हो भत्किइन्छ र थिचेर मार्छ’ भनेर हसिया हथौडा झण्डा छोडेर भागेको मान्छेले रुचाएको पार्टी बन्नु भनेको त माओवादी पार्टी त होइन ।
कम्युनिस्ट पार्टी बन्न नदिनमा आधारभूत भूमिका एमालेपङ्तीको हुन्छ । विशिष्ट भूमिका बाबुरामको हुन्छ । अनि प्रचण्डले कसरी कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर मेन्सेभिक बोल्सेविक जस्तो लेनिन बन्नु हुन्छ ? यो संभावना देखिँदैन । संभव बनाउने हो भने एमालेले माओवाद मान्नुपर्छ ।
६० र ४० को भागवण्डाको कुरा छ । ६० प्रतिशत भनेको संसदीय राजनीतिमा बहुमत हो । यस्तो स्थितिमा माओवादीले बहुदलिय जनवाद मान्ने हो की एमालेले माओवाद ?
ठीक प्रश्न गर्नुभयो । ५१ प्रतिशतले ठेगान लगाईदिन्छ । एमालेको त ६० प्रतिशत हुन्छ । उम्मेदवारको ६०/४० भनेको संगठनमा पनि त्यही लागु हुन्छ । मैले अध्यक्षले यही भनेको छु,‘तपाईंलाई ठेगान लगाईदिन्छ । अझै एमालेले त गोप्य मतदान गर्छ । एमालेको ६० प्रतिशत प्रतिनिधिले महाधिवेशनमा तपाईंलाई भोट दिन्छ र ? अनि अध्यक्ष बन्नु हुन्छ ?’ त्यही निर चामलसँग पिठो साटे सरह हुँदैन ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमालेको अध्यक्ष बन्न चाहानु भएको छ र ?
कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा पनि चलेको छ । एकीकृत पार्टीको अध्यक्षको कुरा पनि चलेको छ । तर, मलाई केही भन्नु भएको छैन । किन भने सानो तिनो एन्टिवायोटिकले गोपाल किरातीको यो घाउ निको हुँदैन । नक्कली एन्टिबायोटिकले पनि हुँदैन सक्कली एन्टिवायोटिक चाहिन्छ । अहिले प्रचण्डको सक्कली एन्टवायोटिकको प्रयत्न छ र भन्नु हुन्छ,‘छलफल गरुँ छुटि नहालुँ ।’
जसले माओवाद र पहिचानको मुद्दा छोड्छ पार्टी फूटाउने त्यो हो । म त रक्षा गर्ने हो ।
भन्नाले प्रचण्डले नै पार्टी फूटाएर हिँड्न खोजेको छ भन्ने तपाईंको आरोप हो ?
हो । जसले मुद्दा छोड्छ त्यो हो पार्टी फूटाउने । म त रक्षा गर्ने मान्छे हो । कि त माओवाद र पहिचानको मुद्दा बारे प्रत्याभूति दिलाउनुस् । मलाई खुसुक्क कानमा भनेर हुँदैन । संस्थागत प्रत्याभूति चाहिन्छ । होइन भने म माओवादी पुनर्गठन समिति बनाउँछु । एक्लै भएपनि बनाउँछु भन्ने मेरो मान्यता छ । किन भने विचार शुरुमा एक्लै हुन्छ । त्यसको परिक्षण र प्रयोग गर्न संगठन र समुह चाहिन्छ ।
एमाले कम्युनिस्टै होइन । एमाले त घोर दक्षिणपन्थी तत्व हो । त्यसलाई वामपन्थि बनाउने भन्ने प्रचण्डको प्रयाससम्म ठीक छ । गधालाई दोहोएर गाई हुँदैन भन्ने उखान जस्तै एमालेलाई निचोरेर वामपन्थि हुन्छकी हुँदैन त्यो भोलीको विषय भयो ।
एमाले कम्युनिस्टै होइन । त्यो दक्षिणपन्थि हो । किन भने त्यसले माओवाद मान्दैन । हामीले माओलाई गुरु मान्दै आयौँ । म त आजिवन रुपमा मान्नेनै छु । प्रचण्ड माओलाई गुरु मान्ने सन्दर्भमा सक्रमणमा देखिनुहुन्छ ।
अब प्रचण्डले तपाईंलाई फेरी फकाई फुलाई पारेर एकतामा ल्याउँछन् वा गोपाल किराती फेरी अर्को जोखिम मोलेर माओवादी पुनर्गठन तिर लाग्छ ?
फकाई फुलाइले हुँदैन । पूर्वको पार्टी सम्हाल्नका लागि मैले नै प्रदेशको बैठकमा मुख्य मन्त्रीको उम्मेदवार गोपाल किरातीलाई प्रस्ताव गरेँ । अरु साथीहरुले ठीक भन्नु भयो र हामीले निर्णय गरेर केन्द्रमा सिफारिस गरेका छौँ । तर, म अब उम्मेवार हुन्नँ । मौखिक मात्रै होइन लिखित दिन पनि म तयार छु । माओवाद र पहिचानको शत्रु एमालेको घेरावन्दि भित्र रहेर म मुख्य मन्त्रीको कुर्शीमा बस्दिनँ । किन भने अब मुख्य मन्त्रीको ग्यारेन्टी भयो । बरु अस्ति ग्यारेन्टी थिएन ।
मैले कस्सिएर ‘म मुख्य मन्त्री हुनुपर्यो’ भन्ने हो भने एमालेका को–को छन् तीनले छोड्न परिहाल्छ । उहिलेको एउटा गीत जस्तो,‘जीउ मात्रै यहाँ मन कहाँ’ भनेजस्तै अवस्थामा हुन्छ । शरीरको लास चाहीँ मुख्य मन्त्रीको कुर्शीमा हुन्छ विचार चाहीँ मिल्दैन । र, जनताको सेवा गर्न म सक्दिनँ । नसकेपछि ‘खतम रहेछ यो गोपाले भनेको’ भनेर झन राजनीति सिद्धिन्छ । त्यसकारण म मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार पनि हुन्न । समानुपातिक, प्रत्यक्ष, प्रदेश, केन्द्र कतै हुन्न । तपाईंले मलाई माओवाद र पहिचानको मुद्दामा प्रत्याभूति दिनु भयो भने म पार्टी संगठनमा काम गर्छु । वैचारिक काममा लाग्छु । मन्त्री, प्रधानमन्त्री अरु साथी नै होउन् । मेरो लोभ छैन । यदि प्रत्याभूति दिलाईदैन भने पुनर्गठन समिति बनाउँने संभव भएमा युवा साथीहरुको बीस ५० जना जुटाउन सकेमा लडाकु दस्ता बनाएर पहिचान विरोधी उम्मेदवार माने एमालेको उम्मेदवारलाई ‘ड्याङ्की ड्याङ’ ठोकिन्छ ।
यस्तोमा गठबन्धनका माओवादीकालाई पनि निसाना बनाउनुहुन्छ ?
माओवादीलाई अहिल्यै कुटि हालिँदैन । एक दर्जन जति एमालेका पहिचानविरोधी उम्मेदवारलाई भाटा ठोकेपछि देशको सबैभन्दा क्रान्तिकारी पार्टी हाम्रो हुन्छ ।
एमाले कुट्दैमा क्रान्तिकारी भइएला र ?
एमालेलाई कुटेको होइन त्यो त पहिचान विरोधीलाई कुटेको हुनेछ । यदि प्रत्याभूतिको काम भयो भने त म वैचारिक काम गर्छु । उम्मेदवार चाहीँ बन्दिनँ । फकाउने लोभलालच देखाउने कोही ठाउँ छैन ।
जनजाती र मधेसी धारको विश्लेषकहरुले वामपन्थि गठबन्धनलाई ‘ब्राम्हण एकताको’ रुपमा समेत विश्लेषण गरिरहेका छन् । तपाईंको बुझाईमा पनि त्यस्तै हो र ?
बुझाईको कोण हुन्छ । प्रचण्ड जन्मले बाहुन कर्मले कम्युनिस्ट भन्ने गरेकोछु । खड्क ओली जन्मले बाहुन हो तर कर्मले दलाल हो । मैले वर्गिय दृष्टिकोणले हेर्छु । नेपाली समाज जसरी यहाँ आइपुगेको छ । एउटा समुदायले अर्को समुदायमाथि निषेधको दृष्टि राखेर काम चल्दैन । असमानता छ, विभेद छ , समस्या छ । हल गर्नु पर्छ । तर, हल गर्नका लागि माओवादी विज्ञान चाहिन्छ । बाहुनहरुको एकताको रुपमा पनि जातिवादी कोणबाट बुझ्न सक्छ । त्यो उसको अपराध हो भन्ने मलाई लाग्दैन । मैले चाहीँ वर्गिय दृष्टिकोणबाट हेर्छु ।
अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट भएपछि तपाईंको प्रेसर बढेर समस्यामा हुनुहुन्छ भन्नु भएको थियो । के हो वास्तविकता ?
२१ गते १ घण्टा बसियो । हिजो आधा घण्टा बसियो । आज पनि बोलाउनु भएको छ । प्रेसर चाहीँ १६ गतेदेखि नै बढेको थियो । हिजो २२ गते विहान अलि उत्कर्षमा पुग्यो । झण्डै मरियो । प्रचण्डसँग सौहार्द छलफल गरिएको छ । शक्ति समुहमा म त्यतिबेला सानो समुहमा थिए । तरपनि एउटा सशस्त्र समुहको नेता प्रचण्ड र अर्को सशस्त्र समुहको नेता यो गोपाल किराती थियो ।
अन्त्यमा यदि तपाईंले माओवादी पुनर्गठन गर्नु भएको खण्डमा माओवादी मुख्यालय पेरिसडाँडाबाटै तपाईंको पार्टी सञ्चालन हुन्छ ?
भौतिक शक्तिको हिसाबले त मलाई लखेट्नु हुन्छ होला । तर, पेरिसडाँडाको कार्यालय मेरो हो । पेरिसडाँडा भनेको माओवाद र पहिचान मान्नेको हो ।
पेरिसडाँडामा त प्रचण्डहरु हुनुहुन्छ । कसरी उहाँहरुलाई लखेट्नु हुन्छ ?
सैद्धान्तिक रुपमा लखेट्ने नै हो । भौतिक रुपमा उहाँहरु बलियो हुनुहुन्छ । सैद्धान्तिक रुपमा पेरिसडाँडा मेरो हो । त्यो परिसडाँडामा माओवाद भनेर धेरै बैठक गरिएको छ । पहिचानवादीहरुका
मोर्चाहरुको बैठक गरिएको छ । यो माओवादको हेडक्वाटर हो । पहिचान र माओवाद नमान्नेको पेरिसडाँडा होइन ।
ज्वालामुखी विस्फोटको खतराका कारण इन्डोनेसियाका अर्को विमानस्थल पनि बन्द
बाली, इन्डोनेसिया, १४ मङसिर । इण्डोनेसियाको बाली द्वीपमा ज्वालामुखी विस्फोटको खतराका कारण फेरि अर्काे विमानस्थल पनि बन्द गरिएको समाचार छ ...
लोकेन्द्र विष्टको खुलासा: ‘प्रचण्ड निवासमा ‘रअ’ र सिआइएका मान्छे टुप्पी नाघेर प्रवेश गर्छन्’
चर्को सुरक्षा घेरामा भित्र रहने संसद भित्रै ‘बन्दुक’ बोकेर प्रवेश गर्ने एकमात्र सांसद थिए तत्कालिन माओवादी नेता लोकेन्द्र विष्ट मगर ...
को हुन गाउँ गाउँ बाट उठ….. का गीतकार ? किन ओझेलमा परे ?
गाउँ–गाउँबाट उठ, बस्ती–बस्तीबाट उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ ।’ आमनेपालीमाझ प्रिय छ, यो गीत । जब–जब देशले परिवर्तन खोज्छ, ...